‘रेड लेडी’ – जसको कपाल, कपडादेखि घरसमेत सबै रातो छ (भिडियोसहित) – Khabar Silo
काठमाडौं –तपाईं केके कामहरू गर्न मन पराउनुहुन्छ ?घुम्न, हिड्न, नाच्न, पौडिन, एक्लै बस्न, अध्ययन गर्न या अरू केही ? तपाईं शोखिन हुनुहुन्छ भने के कस्ता कुरामा हुनुहुन्छ ? एकपटक सोच्नुहोस् त ।
सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ, कुनै एक युवतीले आफ्नो शोख पुरा गर्नका लागि आफ्नो कपालदेखि घरसम्मको सबैमा एउटै रंग बनाउन सक्छिन् ।
यो घटना यूरोपको बोस्नियाको हो ।त्यहाँ एक महिला ‘रेड लेडी’को नामले परिचित छिन् । उनका कपाल, कपडादेखि घरभित्रका सम्पूर्ण सामानहरू राता छन् ।
जोरिकालाई रातो रंग यति धेरै मन पर्छ कि उनले आफ्नो आसपासका सबै वस्तु रातो देख्न चाहिन्छिन् । उनले आफ्नो अन्तिम संस्कार पनि रातो पहिरनमा नै गर्न चाहेको बताउँछिन् ।
६७ वर्षिया जोरिक शिक्षण पेसाबाट रिटार्यड भइसकेकी छिन् । उनले १८ वर्षको उमेरदेखि रातो रंगको पहिरन लगाउने शोख थियो, जुन आजसम्म पनि कायम नै छ ।उनको घरमा पानी मात्रै रातो रंगको छैन, बाँकी सबै सरसामानहरू रातै छन् ।
यूरोपको बोस्नियामा बस्ने जोरिकाको घरमा फर्नीचर, प्लेट, बेडशीट तथा अन्य सामाग्री सबै रातो रंगको छन् । उनके कपाल रातो छ, कपडा रातो छ, जुत्ताचप्पल रातो छ, सब चिज रातो छ यद्यपी पानीको हिटर भने रातो छैज । पानीको हिटर भने उनको पतिले खरिद गरेका थिए।
जिगत ४ दशकमा जोरिका आफ्नो यस बानीका कारण चर्चित बनेकी छिन् भने मानिसहरूले उनलाई सेलीब्रेटी मानेका छन् । एजेन्सी
Posted on September 9, 2020 Author khabar silo
वस्तु शास्त्रमा ,आफूले मेहेनत गरेर कमाएको पैसा घरमा कस्तो ठाउँमा राख्दा उत्तम हुन्छ भन्ने कुरालाई महत्वका साथ बताइएको छ । घरको कुन दिशामा पैसा राख्दा लक्ष्मीले संधैब वास गर्छिन भन्ने कुरा स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरिएको छ । यदि तपाई आफ्नो कमाईबाट आर्जित धनको राम्रो संचय गर्न चाहनुहुन्छ भने वस्तुशास्त्रमा बताइएका यी कुराहरुमा राम्रो ध्यान दिनुहोला […]
काठमाडौ । कोरोना भाइरसको जोखिम कामय नै रहेको समयमा नेपालमा हिन्दु धर्मावलम्बीहरुको महान पर्व दशैं तिहार जस्ता चाड आएको छ । कोरोनाको जोखिम उच्च रहेका कारण यो वर्षको दशैंको टिका थाप्दा अनिवार्य रुपमा सावधानी अपनाउन विज्ञले सुझाव दिएका छन् । काठमाडौ उपत्यका लगायतका ठाउँमा कोरोना समुदायमै फैलिसकेको छ । त्यसैले पनि उच्च सतर्कता अपनाउनु अनिवार्य […]